Oday Soomaali Norwegian ah ayaa ka mid ahaa ragii fuliyay weerarkii Buulo Burde – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Oday Soomaali Norwegian ah ayaa ka mid ahaa ragii fuliyay weerarkii Buulo Burde
MAREEG 19 March 2014 4 April 2019
Mareeg.com-Al-Shabaab ayaa baahisay nin Soomaali Norway oday ahaa inuu ka mid ahaa kooxihii fuliyay weerarkii habeen hore lagu qaaday degmada Buulo Burde.
Idaacada Andulus oo ku hadasha afka Shabaab ayaa sii deysay codka ninkan oo da’diisa lagu sheegay 60-sano jir ka soo hijrooday dalka Norway muddo 13sano ka dagaalamayay Soomaaliya.
Qaraxa oo ahaa mid ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay si loogu furto afaafka hore hotelka oo ilaalo adag laga hayay, iyadoo markii qaraxa dhacay uu bilowday iska hor imaad culus.
Weerarka ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 20 ruux oo isugu jiray askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti.
Qofkan ayaa noqonaya ninkii ugu da’da weynaa ee fuliyay weerarada ismiidaaminta, iyadoo horay Al-Shabaab weeraradan u adeegsan jireen dhalinyarada.
Dowlada Soomaaliya oo Hubka in ay dhigaan ugu baaqday Dhalinyarada Al Shabaab